Maxay tahay sababta basaasiinta WhatsApp-ka ay Iiraan u daneynayaan - BBC News Somali
Jabsashada WhatsApp-ka, dhibaateynta maraakiibta xamuulka ee sida saliida, go'aanka Mareykanka ee lagu mamnuucayo ururka Ikhwaanul Muslimiinka iyo "qorshaha" ciidamada Mareykanka lagu geynayo Khaliijka ayaa dhammaan leh hal ujeedo, waxaana udub dhexaad u ah loolanka u dhaxeeya Israa'iil, Sucuudi Carabiya iyo Iiraan.
Milatariga Israa'iil ayaa waxa uu laf-dhabar u yahay warshedaha Israa'iil, sababtuna waxay tahay adeegga qaranka ee dhallinta dalkaasi ay soo maraan.
Milatariga Israa'iil ayaa waxa uu qaataa dhallinta da'da yar, ka dibna waxa uu qof kastaa eegaa halka uu ku habboon yahay ee looga faa'iideysan karo.
Aqoon yahannada ku takhasusay koombiyuutarada ayaa looga faa'iideystaa aqoontooda, waxaana lagu biiriyaa adeegga qaran, halkaa oo ay ka sii wadaan dagaalka dhanka intarneedka.
Balse waxaa la siiyaa ruqsad ay dibadda ugu dhoofin karaan wax soo saarkooga waa haddii aysan wax u dhimayn amniga Israa'iil.
Sababtuna waxa ay ahayd waayadii hore waddamada Khaliijka waxa ay garab taagnaa dadka reer Falastiin oo waxa ay ka soo horjeedeen Israa'iil.
Wixii ka dambeeyay kacdoonkii Carabta, waddamada Khaliijka marka laga reebo dalka Qadar waxa ay dhammaantood faraha kala bexeen qaddiyadda Falasdhiin, oo waxa ay la safteen Israa'iil, iyaga oo ka soo horjeesaday Iiraan.
Waxaa jira warar badan oo sheegaya in xukuumadda Israa'iil ay doonayso in ay xiriir wanaagsan la yeelato waddamadan Khaliijka, sidaa awgeedna waxay shirkaada NSO Group u ogolaatay in barnaamijkeeda Kombiyuutarada ay ka iibiso waddamadaasi Khaliijka.
Ra'iisulwasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dhaxalka siyaasadeed ee hoggaankiisa ku sheegay dedaalladiisa uu ku xakameynayo awoodda Iiraan, oo uu ku tilmaamay in ay tahay cadowga kaliya ee Israa'iil ee haatan jira.
Farqiga kaliya ee u dhaxeeya ayaa ah madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi, George W Bush ayaa mabda' ahaan rumeysnaa in ay tahay waajibaad isaga saaran in bariga dhexe uu ku soo dabbaalo dimuquraadiyad. Si arrintaa ay ugu suurtagashana, waxa uu ku khasbanaa in xukunka laga tuuro Saadaam Xuseen.
Balse madaxweyne Trump aad ayuu uga duwan yahay oo marnaba ma rumeysno wax mabda' ah, waxaana siyaasaddiisu tahay mid ganacsi ku saleysan.